भारतमा एकैदिन ३ लाख १५ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण — Sanchar Kendra
१प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, हेर्नुहोस मन्त्री बन्नेहरुको नामलिस्टसहित
२प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ
३ओली क्याबिनेटका क-कसलाई खुवाइदैछ सपथ ?
४गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
५माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
६ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक
७ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?
८कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर चर्चामा रहेकाे भुटानी मोडल
९जङ्गलमा यस्तो काण्ड मच्चाइरहेका बेला अचानक प्रहरी पुगेपछि भयो दोहोरो भि’डन्त
१०विवाहको सात महिनापछि नेहा रोहनप्रितबीच हातपात, भाइरल बनेको भिडियोसहित
११ओलीलाई प्रचण्डले फोन गरेर भने- यो के तमासा गर्नुभएको ?
१२चपली हाइटमा के भयो त्यस्तो सहमति ? जसकारण फेरी प्रधानमन्त्री बने ओली, खुल्यो यस्तो रहस्य
भारतमा एकैदिन ३ लाख १५ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । पछिल्ला केही दिन यता लगातार दैनिक २ लाख ५० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण हुँदै आएको भारतमा पहिलो पटक एकै दिन संक्रमितको संख्या ३ लाख नाघेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ लाख १५ हजार ८०२ जनामा संक्रमण भएको छ । २४ घण्टामा संक्रमण पुष्टि हुनेको यो संख्या भारतमा अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
यसअघि (सोमबार) वैशाख ८ मा भारतमा दोस्रो धेरै २ लाख ९४ हजार २९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या १ करोड ५९ लाख २४ हजार ८०६ पुगेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा १ करोड ३४ लाख ४९ हजार ४०६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । अब भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २२ लाख ९० हजार ७२८ छ ।
यस्तै भारतमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ८४ हजार ६७२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ थप २ हजार १०२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सङ्क्रमण बढेपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा पूर्ण लकडाउन घोषणा गरिएको छ । महाराष्ट्रमा गएको २४ घण्टामा ६७ हजारभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन् भने पाँच सय ६८ जनाको ज्यान गएको छ ।
अब आउँदो मे १ तारिखसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । महाराष्ट्र राज्यमा विवाह उत्सवमा २५ जनालाई मात्र सहभागी हुन पाउने भएका छन् भने सार्वजनिक बसमा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रुलाई चढाउन पाइने छ ।
लकडाउनभर सरकारी कार्यालयमा १५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी रहने छन् भने लोकल रेलमा कामका लागि मात्रै यात्रा गर्न भनिएको छ । संक्रमणमा दैनिक नयाँ रेकर्ड हुँदै गएको भारतमा केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरातलगायत राज्य सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, हेर्नुहोस मन्त्री बन्नेहरुको नामलिस्टसहित
जङ्गलमा यस्तो काण्ड मच्चाइरहेका बेला अचानक प्रहरी पुगेपछि भयो दोहोरो भि’डन्त
चपली हाइटमा के भयो त्यस्तो सहमति ? जसकारण फेरी प्रधानमन्त्री बने ओली, खुल्यो यस्तो रहस्य